Global Voices teny Malagasy » Serbia: “Tononkalo alahelo ho an’ny kisoa iray” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2018 2:59 GMT 1	 · Mpanoratra Sinisa Boljanovic Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Serbia, Soeda, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Janoary 2008)
Marobe ireo Serba- zatra mankalaza ny Krismasy Ortodoksa  amin'ny alalan'ny fanapoahana basy sy basy poleta, ary misotro rano voajanahary miloko  sy mihinana kisoa.
Manoratra momba ny fetin'ny 7 janoary ny bilaogera Serba nandritra ny andro maromaro izao, saingy nandefa  tononkalo manesoeso avy amin'ilay poeta Serba Vojislav Ilić  nivoaka tamin'ny taona 1887 ny iray amin'izy ireo – dia i Jelica Greganović  – raha tokony hamorona ny fehezan-teniny manokana.
Natokana ho amin'ny fankalazana ny Krismasy Serba ny tononkalo – kisoa:
Tononkalo alahelo ho an'ny kisoa iray
Inona ny olana? Inona no mitranga?!
Mijery ahy am-pitsikiana sy faniriana lehibe te-hihinana ny tompon'ny trano.
Teo nandritra ny ela ity fomba amam-panao maharikoriko ity,
Vonoina foana ny kisoa rehefa teraka Kristy.
Namaky boky fahiny aho,
Ary nahita zavatra isan-karazany tao.
Tena mpino Ortodoksa marina izy ireo rehefa ankalazaina ny krismasy,
Ary nahazo ny lohako ny (vely) kibay voalohany.
Mitranga ny zava-drehetra, zava-mahagaga isan-karazany,
Saingy tsy faly na aiza na aiza ny kisoa Ortodoksa.
Andriamanitra ô, iza no hiandry fahafatesana tahaka izany?
Hey, ry renirano Danube, nahoana no tsy alainao akaiky aho?
Tsy mifanaraka amiko tsara ity fetibe ity,
Satria izany no zavatra tadiavin'ny kisoa mampalahelo farafaharatsiny.
Milalao sy mitrosotrosona amin'ny fotaka ny kisoa,
Tsy miraharaha raha mandoto azy ny fotaka.
Raha tsy misy ny marika fahatsapan-tena sy fanahy,
Raha mihevitra fotsiny izay azo hohaniny izy.
Isaky ny mankalaza ny krismasy ny mpino Ortodoksa,
Mandona ny lohako ny kibay voalohany.
Veloma ry fotako sy reniko, rahavaviko,
Veloma ry saha mangina sy ala manankarena.
Satria tsy hihosona amin'ny fotaka intsony aho
Mipaipaika amin'ny famataranandroko ny ora farany.
Ah, iza no hiandry izany fotoana mahatsiraviina izany?
Hey, ry renirano Danube, nahoana aho no tsy nalainao?!
Nahazo fanehoan-kevitra 134 ity lahatsoratra ity, ary ity ny roa tamin'izy ireo:
Nanana hevitra tsotra aho fa hankalaza krismasy tsy misy zana-kisoa eo am-pisakafoanana izahay satria tsy fantatro hoe aiza no mety hitantsika izany eto? Tahaka ny biby fiompy an-trano ny kisoa kely eto. Raha nahita azy ireo nariana ny Soedoà, dia hilaza amintsika fa olon-doza kokoa izy ireo. Mino aho fa tokony adinoina ny ady rehetra. Mampiely tsaho manodidina an'i Eoropa izy ireo: “Olon-doza, manatono zana-kisoa izy ireo”… Nilaza tamiko ny sakaizako taona vitsy lasa izay, raha mbola nonina tany Serbia aho, fa nahita tovovavy mandehandeha miaraka amin'ny zana-kisoa mainty tao an-tanàndehibe aho. Nahafinaritra izanyl!!! […] Na izany aza, nihevitra aho fa tsy nisy zana-kisoa, saingy nahita fomba nandefasana ny zanany lahy hilanja kisoa kely i mama (rafozana), mba ahafahany mankalaza an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy! […] Tsy nanantena aho fa hahita fomba handefasana kisoa avy any Serbia i mama .
Broccoli no sakafoko maraina amin'ny Krismasy. Ry Eoropeana, mpampianatra Euro-Atlantika, mpanova ny feon'ny fieritreretana sy ny rafitry ny soatoavina ara-tsosialy, andraso aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/123742/
 Krismasy Ortodoksa: http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodoxy
 rano voajanahary miloko: http://en.wikipedia.org/wiki/Slivovitz
 Vojislav Ilić: http://en.wikipedia.org/wiki/Vojislav_Ili%C4%87
 Jelica Greganović: http://blog.b92.net/blog/4535/Jelica%20Greganovi%C4%87/